နို့သောက်ရင် ဝမ်းပျက်မှာလား ၊ ဝမ်းချုပ်မှာလား? | OnDoctor
နို့သောက်ရင် ဝမ်းပျက်မှာလား ၊ ဝမ်းချုပ်မှာလား?
By OnDoctor Editor	 On May 25, 2020
” နို့ ” ဆိုတာ လူတွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ အစားအသောက် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်နို့ ၊ နွားနို့ ၊ ဆိတ်နို့ နှင့် နို့မှုန့်တွေဟာ လူတွေမှီဝဲ စားသောက်အာဟာရ တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။
တစ်နေ့လျှင် နို့တစ်ခွက် သောက်သုံးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယေဘုယျ ကြည့်လျှင် နို့ဟာ အာဟာရ ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်ဖြစ်တယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗိုက်တာမင် ဒီ ၊ ရေဓာတ် ၊ သတ္ထုဓာတ် နှင့် ဗိုက်တာမင် ကြွယ်ဝစွာပါတဲ့အတွက် အရိုး ၊ သွားများ၊ ကြွက်သား နှင့် အာရုံကြော ၊ ကိုယ်ခံအား နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးအောင် များစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါတယ်။
သို့သော် အချို့သော လူများ၊ အချို့ အခြေအနေများတွင် အစာအိမ် နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး အတွက် သတိထားရမယ့် အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။
(၁) သေချာစွာ မကျိုချက်ထားသော နို့များ
– မိခင်နို့မှ လွဲပြီး အခြားသော သဘာဝနို့များ / အသင့်သောက်ရန် ထုတ်လုပ်ထားသော နို့အမျိုးမျိုး ဟာ သေခြာစွာကြိုချက်ဖြစ် (Pasteurization) သေခြာစွာ လုပ်ရပါတယ်။
– အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြား နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ နို့ရည်တွေမှာ လူသားတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ပိုးတွေများစွာ ပါဝင်နေလို့ဖြစ်တယ်။
– သေခြာစွာ မကြိုချက်ထားသော နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း တွေပါ အစာအဆိပ်ဖြစ်စေသော အူယောင် ငန်းဖျားဖြစ်စေသော ပိုးတွေ ပါပါတယ်။
– ဒါကြောင့် သင်သေချာစွာ မကြိုချက်ထားသော နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို စားသောက်မိလျှင်တော့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်း ၊ အန်ခြင်းမျိုး ခံစားရပါမယ်။
(၂) နို့မှုန့် နှင့် ဖော်မြူလာ နို့များ
– နေမကောင်းဖြစ်၍ အာဟာရနို့မှုန့်ဖြည့်စွက်အာဟာရအနေ နှင့်သောက်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ဖော်မြူလာနို့ ဖျော်တိုက်နေရလျှင် အရေးအကြီးဆုံးမှာ သတ်မှတ်ထားသော အချိုးအစား အတိုင်း ဖျော်တိုက်၊ ဖျော်သောက်ရပါမယ်။
– ကျဲလွန်းလျှင် သတ်မှတ်ထားသော အာဟာရ အတိုင်း မရရှိပဲ ပြစ်လွန်းလျှင် ဝမ်းလျှောတတ်ပါတယ်။
– နောက်ထပ် သတိထားရမည်မှာ နို့မှုန့် နှင့် ဖော်မြူလာနို့များရဲ့ သက်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်း လွန် နို့များက အစာအဆိပ် ဖြစ်စေပါတယ်။
– ပြင်ဆင်သည့်အခါ လက်၊ ဇွန်း၊ နို့ဘူး ၊ခွက် ၊ ရေ မသန့်ရှင်းလျှင်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါ တယ်။
(၃) Lactose ဓာတ်ကို မခံနိုင်ခြင်း (Lactose Intolerance)
– နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ Lactose လို့ခေါ်တဲ့ သဘာ၀ သကြားဓာတ်ထုတ်ပြီး တစ် မျိုး ပါဝင်ပါ တယ်။
– ထိုLactose ဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ Lactase လို့ ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးထုတ်ပြီး ဂလူဂို့စ် နဲ့ ဂလတ်တို့စစ် သကြားဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပါမှ အစာ အိမ် နှင့် အူလမ်းကြောင်းက စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
– လူ တစ်ချို့ နှင့် အချို့ အခြေအနေတွေမှာ Lactae အင်ဇိုင်းအလုံ အလောက် မထွက်သည့် အခါ၊ စားမိသည့် နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများမှာ Lactaoe ပါဝင်မှုဟာ အင်ဇိုင်းပမာဏထက် များနေသည့်အခါ Lactase ဓာတ်ကို မခံနိုင်ခြင်း အခြေအနေ ဖြစ်လာပါတယ်။
– နို့ နှင့် နို့ ထွက်ပစ္စည်း စားပြီး နာရီဝက်မှ ၂ နာရီအတွင်း ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်းတို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
– Lactose ဓာတ်မပါအောင် လုပ်ထားသော နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ကို ပြောင်းလဲစားသောက်ခြင်း၊ Lactose အင်ဇိုင်းဖြည့်စွက်သောက်သုံးခြင်း၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ပမာဏ လျှော့၍ သောက်သုံးခြင်း နှင့် ခေတ္တရှောင်ခြင်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
(၄) နို့သောက်ခြင်း နှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်း
– အချို့သော နွားနို့ နှင့် မတည့်သော လူအုပ်စု (Cow Milk Protein Allergy) များတွင် နွားနို့ဟာ ဝမ်း ချုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
– နွားနို့တွင် ပါဝင်သော အသားဓာတ် (Protein) ဓာတ်ကို မခံနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။
– နွားနို့ကို ၂ ပတ် ရှောင်ခြင်းဖြင့် ပုံမှန်ဝမ်း အနေအထားကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
– ထို့အပြင် နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ အမျှင်ဓာတ် နည်းပါးတဲ့အတွက် နေ့တဓူဝ အစားအသောက်မှာ နို့ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ အလွန်အကျွံ စားမိပြီး အသီးအနှံ နှင့် အသီးအရွက်အစားနည်းလျှင်လည်း ဝမ်းချုပ် စေနိုင်ပါတယ်။
M.B ; B.S (Ygn)
Covid ကြောင့် Stay Home ‌ေနကြတဲ့ ကာလမှာ Vitamin D က ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ?
အစာချေစနစ်ကို ဒုက္ခပေးမယ့် အစားအသောက်အကြောင်း
Covid ကြောင့် Stay Home ‌ေနကြတဲ့ ကာလမှာ Vitamin D က ဘာလို့…